पाठकको पत्र - नेपाल
केदार वाशिष्ठ , भाद्र २९, २०७३
नेपाल संवाददाता, श्रावण २४, २०७२
अहिले देशमा कोही नायक कहलिएका छन् भने ती हुन् सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित।
मुलुकको समुन्नतिका लागि सम्भावित ब्रान्डबारे नेपालको खोजी गजबको छ ।
अग्ला र ठूला संरचना व्यवस्थित सहरीकरणका लागि आवश्यक छन् । तर, ती सहरका मानक स्वरुप हुनु जरुर ी छ ।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि खर ाबी छ भने प्रशासनलाई सुधार्ने जिम्मा वामदेव गौतमकै हो ।
सधैँ नेताका राजनीतिक गफ मात्र कति सुन्नु ? यस्तै दु:खी–गरिब र भाग्यले ठगिएका जनताका समाचार पनि पस्किदिए हामीलाई खुसी लाग्ने थियो ।
त्रिदेशीय नाकाका रूपमा रहेको लिपुलेकबाट व्यापार बढाउन दुई छिमेकीले गरेको आपसी निर्णय नेपालका लागि ठूलो झड्का हो।
कुनै बेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहिसकेका राष्ट्रपति रामवरण यादवमा यति धेरै पदप्रतिको आशक्ति कहाँबाट पलायो ?
उत्कृष्ट दस प्लस टुबारे नेपालको सामग्री अत्यन्त सहयोगी लाग्यो ।
भागेर नेपाल आएका रोहिंगा शरणार्थीको पृष्ठभूमिबारे कसैलाई थाहा छैन, जसका कारण भोलिका दिनमा विभिन्न खाले आर्थिक–सामाजिक समस्या निम्तिन सक्छन् ।